Welcome to Taungoo Blog: အသစ်
Welcome to Taungoo Blog
တောင်ငူမြို့ဘလော့မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ၀င်ရောက်အားပေးခြင်းအားများစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
မင်္ဂလာပါ............. ကျနော်တို့ရဲ့တောင်ငူဘလော့လေးကို ဒီထက်ပို၍ကောင်းမွန်စေလာရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်.. ဘလော့ဆိုတာထက် အွန်လိုင်းပေါ်က မဂ္ဂဇင်းသဖွယ်နယ်ပယ်တစ်ခု ရလာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ်.. ထို့ကြောင့် အကြံပေးလို၊ ထောက်ပြဝေဖန်လိုသည်များရှိသော် info@taungoo.net သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ အကြံများပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား....
ဒီနေရာမှာကလစ်နှိပ်ပြီးပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မေးခွန်းလေးတွေမေးရင်း အဖြေကို စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ ...
www.sithuhein.net ကို Wordpress နဲ့ ဖန်တီးလိုက်ပါတယ်...
ကျွန်တော်ကတော့ ဝေါ့ပရက်စ်ကို ဘလော့ဂါလောက် မငြိတွယ်ဘူးဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ဆိုဒ် (www.wordpress.com)ထဲမှာ သွားလုပ်ရင် ဖရီးတော့ရပါရဲ့၊ အဘန်းလည်း(လောလောဆယ်) လွတ်နေပါသေးရဲ့.. ဒါပေမယ့် CSS တွေကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ခွင့်မရဘူး .. နောက်ပြီး ဒီဇိုင်းအသစ်၊ သင်းမ်အသစ်တွေကို ထပ်ဖြည့်လို့မရဘူး .. သူ့ထဲက ဒီဇိုင်းတွေပဲ ယူသုံးရတယ်... (ဒီဇိုင်းတွေတော့ စုံစုံလင်လင်ရှိပါတယ်.. ဒီတစ်ခုတော့ ဘလော့ဂါထက်ပိုတယ်) ..
ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဟို့စ်စတင်း တစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ်၊ အင်တာနက်က ဖရီးပေးထားတဲ့ ဟို့စတင်း တစ်ခုခုမှာဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ Wordpress Latest ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီး သွားထည့်လိုက်။ ဒါဆိုရင်တော့ အစုံလုပ်လို့ရနိုင်တယ်... သူက ဘလော့ဂါလိုမျိုး main XML တစ်ခုတည်း ပြင်ခွင့်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ .php ဖိုင် တော်တော်များများကို ပြင်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဘလော့အဖြစ်တင်မကပဲ Portal ဆန်ဆန် မူရင်း Home page အတွက်ပါ ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ... ကိုယ့်ဆာဗာမှာကိုယ်တင်ရင်တော့ ဒီဇိုင်း ၂ မျိုးလောက်ပဲ ပါလာပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဒီဇိုင်းရှာဖို့သာ ပြင်ထားပေရော့ပဲ....
(အချိန်ရသေးရင် ဘလော့အကြောင်းကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးမယ်)
Author : စည်သူ
ခေါင်းစဉ် - သုတရေးရာ
ဤစာအပေါ်သင့်အမြင်(ဒီမှာရေးပေးခဲ့ပါ) | Trackback
~ တောင်ငူရွှေဆံတော်ဘုရားပေါ်မှာ ~ ၁၃၇၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့
proudly presented by SiThu
Why Taungoo city blog born
One day our tiny blogger team from Taungoo met atashop as usual and hadadecision to settle site about "Taungoo" - our city. We aim to build the site but for now we can start only blog for Taungoo city. So the blog come out here. ***********************
Myoe Htet Zaw
Taungoo Blog's Widgets
တောင်ငူဘလော့လေးကို မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘလော့နဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ ကြေငြာဖို့အတွက် Widgets လေးနှစ်ခုပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကြေငြာပေးပါလို့။ သက်ဆိုင်ရာပုံအောက်မှာပါတဲ့ ကုတ်လေးကိုကော်ပီကူးထည့်ပေးရုံပါပဲ။
Myanmar Font Download Here
Click the Image to download myanmar font including Zawgyi-One (True Type Font) and Zawgyi Installer
မြန်မာစာ မြန်မာစကား (1)
အင်တာနက်သုံးရင် ဘယ်ဘရောင်ဇာကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသလဲ? မဲပေးခဲ့ကြပါ။
Initially Site Owner : တောင်ငူနယ်သား
Initially Site Re-touching : စည်သူ
Additionally Designer : melodiousmyth
Specially thanks to Paw Oo for the Tgo Banner!
Other Staffs are not available for recent - those list will come soon.
Thanks for appreciate us!